Ahoana no ahafahan'ny Geographie mamelatra ny toetr'andro any amin'ny faritra
Ahoana ny endriky ny fambolena amin'ny toetr'andro any Etazonia
Ny fahaizana ilaina amin'ny fianarana mamaky ny sarin'ny toetrandro dia mianatra ny jeografia.
Raha tsy misy geography, sarotra be ny miresaka momba ny toetr'andro. Tsy hoe tsy misy toerana azo fantarina amin'ny fampitana ny toerana sy ny lalan'ny tafio-drivotra, fa tsy misy tendrombohitra, ranomasimbe, na landy hafa mba hifaneraserana amin'ny rivotra sy ny toetrandro rehefa mandalo amin'ny toerana iray. (Antsoina hoe meteorology mesoscale io fiarahamonin-tany io.)
Andeha hojerentsika ny faritra amerikana izay matetika lazaina amin'ny toetr'andro, ary ny fomba fijerin'izy ireo ny toetr'andro.
Ny Pacific Northwest
Faritra avaratr'i Pasifika any Etazonia USDA
Etazonia: Oregon, Washington, Idaho, faritanin'i British Columbia
Vetivety dia fantatry ny tanànan'i Seattle, Portland ary Vancouver, ny faritra avaratrandrefan'ny nosy Pasifika, manomboka any amin'ny morontsirak'i Pasifika mankany amin'ny Tendrombohitra Rocky atsinanana. Ny faritry ny Tendrombohitra Cascade dia mizara ny faritany roa ao amin'ny faritra - fitetezana amoron-dranomasina iray sy kontinanta iray.
Any andrefan'ny Cascades, ny rivotra marevaka dia mivoaka avy any amin'ny Oseana Pasifika. Manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa, mikoriana mivantana eo amin'io zoron'ny Etazonia io ny tetezana jet , mamoaka ny tafiotra any Pasifika (anisan'izany ny Pineapple Express) manerana ny faritra. Ireo volana ireo dia heverina ho ny "fotoan'ny orana", raha toa ka efa ho ny roa ampahatelony no mitranga.
Ny faritra atsinanan'ny Cascade dia antsoina hoe ny aty avaratra atsimo andrefana . Eto foana, ny mari-pana isanandro sy isan'andro dia miovaova, ary ny ampahany fotsiny dia hita amin'ny ampahany amin'ny fahitana ny rivotra .
The Intermountain West Region an'ny USDADA
Etazonia: Oregon, Kalifornia, Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Montana, Arizona, New Mexico. Ny "Corners Four" dia tafiditra ao.
Araka ny hevitry ny anarany, io faritra io dia eo anelanelan'ny tendrombohitra. Ny sisin-tany Cascade sy Sierra Nevada dia miorina any andrefana, ary ny Rocky Mountains dia mipetraka any atsinanana. Tafiditra ao anatin'izany ny faritr'i Great Basin, izay efitra iray lehibe noho ny zava-misy eo anelanelan'ny Sierra Nevada sy Cascades izay manakana ny tafio-drivotry ny tafio-drivotra amin'ny famoahana ny fahamendrehana any.
Ny faritra afovoan'i Intermountain West dia ahitana ny sasany amin'ireo firenena avo indrindra. Matetika ianao no maheno ireo toerana misy ny ranomandry voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sy ny ririnina. Ary mandritra ny fahavaratra, ny hafanana mafana sy ny oram-baratra mifandray amin'ny monsoon Amerikana Avaratra dia matetika amin'ny Jona sy Jolay.
The Great Plains faritra Etazonia USDA
Etazonia: Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, Dakota Avaratra, Dakota Atsimo, Oklahoma, Texas, Wyoming
Fantatra amin'ny hoe "tany maina" any Etazonia, ny Great Plains dia mipetraka eo amin'ny sehatry ny firenena. Miorina eo amin'ny sisiny andrefana ny Tendrombohitra Rocky, ary maniry any amin'ny ilany atsinanana mankany amin'ny reniranon'i Mississippi.
Ny lazan'ny faritra ho an'ny rivotra maina izay miposaka dia afaka hazavaina amin'ny alalan'ny meteorology mora mora. Tamin'izany fotoana izany dia nandalo ny Rockies ny rivotra mahamay avy any amoron-tsiraka ary nidina nianatsinanana avy eo, maina izany fa maina ny fahamoram-pony; mafana avy amin'ny fametrahana (famoretana); ary mihetsiketsika haingam-pandeha avy any amin'ny hantsana nidina ny tendrombohitra.
Rehefa mifoka rivotra mafana avy any amin'ny Hoalan'i Meksika ity rivotra mafana ity, dia misy tranga iray hafa mahaliana ny Great Plains: storms.
Ny Tendrin'i Mississippi, Tennessee, ary Ohio
Ny faritra Mississippi, Tennessee, ary Ohio any Etazonia USDA
Etazonia: Mississippi, Arkansas, Missouri, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Ohio
Ireo lohasaha telo dia telo avy amin'ny sehatry ny rivotra avy any amin'ny faritra hafa, anisan'izany ny rivodoza avy any Kanada, ny lozam-pandrefesana Pasifika miala avy any Andrefana, ary ny rafitra mareva-doko mipoitra avy any amin'ny Hoalan'i Meksika. Ireo volkano manempotra ireo dia miteraka fikorontanana sy tornadoes matetika matetika mandritra ny volana lohataona sy fahavaratra, ary tompon'andraikitra amin'ny oram-basy mandritra ny ririnina.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny rivo- doza dia misy sisa tavela amin'ny tafio-drivotra, ka miteraka safo-drano.
Ny Great Lakes
Ny faritry ny Great Lakes ao Etazonia USDA
Etazonia: Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York
Toy izany koa ny faritra Valley, ny faritry ny Great Lakes dia fifehezan'ny vahoaka an'habakabaka avy amin'ny faritra hafa - dia ny rivotra arika avy any Kanada sy ny rivotra marefo avy any amin'ny Golfa any Meksika. Ankoatra izany, ireo farihy dimy (Erie, Huron, Michigan, Ontario, ary Superior) izay faritra nomena ny faritra dia loharano mahamay. Mandritra ny volana ririnina, dia miteraka ny lozam-piangonan'ny lanezy fantatra amin'ny anarana hoe lanezy izy ireo .
Ny faritra Appalachian an'ny USDADA
Etazonia: Kentucky, Tennessee, Caroline Avaratra, Virginie, Virginie, Maryland
Ny Tendrombohitra Appalachian dia miankina amin'ny faritra atsimo andrefana avy any Kanada mankany Central Alabama, saingy ny teny hoe "Appalachians" dia midika matetika hoe ny Teneza tendrombohitra, avaratr'i Carolina, Virginia ary Virginia.
Tahaka ny amin'ny sakana eny an-tendrombohitra, ny Appalachians dia manana lanjany samihafa arakaraky ny faritra misy azy (lamosina na leeward) misy toerana iray. Ho an'ny faritra hita eny amin'ny rivotra, na any andrefana, (toa an'i Tennessee Atsinanana) dia mihamitombo. Ny mifanohitra amin'izany, ny toerana misy ny lee, na ny atsinanana, na ny tendrombohitra (toy ny Andrefana Andrefana Carolina) dia mahazo ny lozam-pamokarana kokoa noho ny any anaty aloka .
Mandritra ny volana ririnina, ny tendrombohitra Appalachian dia manohana ireo hetsika tsy miankina amin'ny toetrandro toy ny rivotra mangatsiaka sy ny rivodoza avaratra (lava-drano).
Midi-Atlantika sy Angletera Vaovao
Ny faritra afovoany Atlantika sy New England ao Etazonia USDA
Etazonia: Virginia, West Virginia, DC, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania; Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Ny faritr'ora dia GMT + 1. Rohy ivelany hanova hanova ny fango Ny rivo-doza eo amoron'ny ranomasina, toy ny naratra sy ny rivo-doza tropikaly, dia miantraika any amin'ny faritra atsimo atsinanana, ary mitatitra ny loza mitatao ho an'ny faritra - ny rivo-doza sy ny tondra-drano.
Ny Geology of Bricks
Nahoana no miova ny fanjakana?
Fifandimbiasan'i Celsius sy Centigrade
Inona avy ny mineraly index?
10 Hevitra ara-batana feno hafahafa
Haber na Haber-Bosch
Misy Fiainana Misy Any Amin'ny Galaxy va Ity?
Ny ampahany amin'ny lolo
Mifantoha amin'ny fifangaroana
Vavaka Kristiana mba hanalefaka ny fanaintainana
Inona no ilainao amin'ny teny Frantsay?
Recording Guitar Acoustic
Fitaovana art amin'ny tetibola iray
Torohevitra ho an'ny Mastering English Grammar
Hiantsena amin'ny teny Espaniola
Ny tantaram-piainan'ny Compton Rapper The Game
Lisitry ny fialam-boly hanohanana ny fahombiazan'ny mpianatra
Manomeza ny isanjaton'ny sanda manokana ao amin'ny Excel
"O Patria Mia" Lyrics sy Text Translation
Nahoana no mifarana ny vavaka amin'ny "Ameen" ny silamo?
Ny tantaran'i Lugenia dia manantena ny fanantenana
8 Connector Words Ny mpianatra italiana dia tokony hianatra
'Metamorphosis' Teny nalaina
Mars ao Capricorn: Mars Marika
Inona no atao hoe radioactivity? Inona no atao hoe taratra?
5 Zavatra mahasalama tsara dia tsy hilaza aminao
'Fahrenheit 451' Teny nalaina
Ireo toetra mampiavaka ny fianarana
Lehibe fandraharahana: bola
Andinin-tsoratra masina momba ny fiarovana ny tontolo iainana
Ny anaran'ny fianakaviana POWELL sy ny tantaram-pianakaviana